(दक्षिण कोरिया) — दोलखाका कुञ्जन थापा र मोरङका दिवस राई अघिल्लो बुधबार सोलदेखि ४० किलोमिटर टाढा याङ्जुस्थित कम्पनीमा काम गर्दै थिए । खाना खाएर काममा लागेको केही समयपछि तार बनाउने उनीहरूको कम्पनीमा अध्यागमनले छापा मार्‍यो । दिवसलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लग्यो । कम्पनीवरिपरि प्रहरी नै प्रहरी थिए, के भएको भन्ने थाहा भएन, दिवसलाई समाएपछि उनीहरू गए,’
कुञ्जनले भने, ‘पछि थाहा भयो अरूले जाँच दिएर भाषा पास गरी आएको आरोपमा उनलाई समातिएको रहेछ । अहिले डिटेन्सन सेन्टरमा राखेर जाँच कसले दिएको हो भनी सोधखोज गरिरहेका छन् भन्दैथ्यो । अर्को हप्ता नेपाल पठाउने रे ।’
अनुहार मिल्ने साथीलाई भाषा परीक्षा लेख्न लगाई कोरिया आएको भन्ने सूचनाका आधारमा एक जनालाई पक्राउ गरिएपछि अध्यागमनले कोरियाभरि यस्ता नेपालीको खोजी बढाएको थियो । पक्राउ परेर फिर्ता हुनेमा कोरियाआएको तीन महिना भएदेखि साढे तीन वर्ष बसेकासम्म छन् । वइजम्बुमा एक जना कोरियाली भाषा परीक्षा दिँदा र अहिले प्रयोग गरेको हस्ताक्षर नमिलेका कारण पक्राउ परेका छन् । सोही क्षेत्रमा भाषा अनुवादकको काम गर्दै आएका मुक्त गुरुङले पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले विभिन्न तरिकाले शंकास्पद व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने गरेको बताए । ‘मैले चिनेको भाइलाई हस्ताक्षर नमिलेका आधारमा पक्राउ गरी केरकार गरेका रहेछन्, पछि उनले अरूलाई जाँच दिन लगाएको स्वीकार गरेपछि नेपाल फर्काइएछ ।’
रामेछापका सुमन बस्नेत दुई महिनादेखि इन्छनमा अध्यागमनको नियन्त्रणमा छन् । कोरियाली भाषा राम्रो भएको एक जना साथीलाई मात्र सहयोग गरेको उनले स्विकारेका छन् । अध्यागमन विभागले उनले पैसा लिएर धेरैको परीक्षा दिएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ । बस्नेतसँगै कम्पनीमा काम गरेका सरोज केसीले दुई पटक अध्यागमनमै गएर उनलाई भेटे । ‘मैले भेट्दा अनुसन्धान हुँदै छ भन्छन्, अध्यागमनले पनि त्यही भनेको भनेकै छ रे,’ केसीले भने, ‘कहिले अदालतमा जान्छ ? कहिले फैसला हुन्छ ? केही थाहा भएको छैन ।’ekantipur.com बाट शाभार